UDkt Precious Mahlambi.
USolwazi Wangomuso WeKhemistri Unentshisekelo Ngokufundisa Isayensi
UDkt Precious Mahlambi wase-School of Chemistry and Physics uqokelwe ukubamba iqhaza ohlelweni lwe-National Research Foundation (i-NRF) nolwe-Department of Higher Education and Training’s (i-DHET) i-Future Professors Programme (i-FPP) ngenxa yokwethembisa kwakhe ekubeni ngumholi wezifundo osafufusa emkhakheni we-analytical environmental chemistry.
Ukuqokwa kukaDkt Mahlambi, oqokwe yi-College of Agriculture, Engineering and Science (i-CAES) kusho ukuthi ungomunye wezifundiswa zaseNingizimu Afrika ezinekhono. I-FFP ilekelela izifundiswa eziqokiwe ngohlelo oluhlelekile lokusheshisa ukuthi abe ngusolwazi, okuzothuthukisa imfundo ephakeme eNingizimu Afrika.
Ukuzinikela kukaDkt Mahlambi emsebenzini wemfundo, ubuciko bakhe, izindlela ezintsha nokukhuthala nothando lokufundiseka nokuphokophela kwakhe nokuthanda ukusebenzisana nabanye kwenze wagqama ngenkathi kukhethwa.
‘Ngithakasile futhi ngijabule ngokukhethwa, ikakhulukazi ngoba isikhundla sikasolwazi yisona esikhulu kunazo zonke kwezemfundo, sonke esihlale siphokophele ukufinyelela kusona,’ kusho yena. ‘Ukuba kulo luhlelo kuzongenza ngibenekhono namava kungisize ngiqhakambise izinga eliphezulu ekufundiseni nasekucwaningeni emazingeni ehlukene.’
Ekhuthazwa wuthando lwakhe lokucobelelana ngolwazi nokukhuthaza isizukulwane sososayensi sakusasa nokushoda kwabantu besifazane abamnyama kwezemfundo eNingizimu Afrika, ikakhulukazi kwiSayensi, kweZobuchwepheshe, eZobunjiniyela neZibalo, uDkt Mahlambi wakhuthazeka ukuthi agxile kwisayensi nokufundisa esikhungweni esiphezulu.
‘Ngihlose ukwenza kube lula ukufundisa nokufunda iSayensi ukwenza izitshudeni ukuthi ziqonde iqhaza layo nobumqoka bayo ezintweni esizenza mihla namalanga ukuze zikhuthazeke ukuthi ziyenze ezingeni eliphezulu,’ kusho uDkt Mahlambi.
UDkt Mahlambi wenza iziqu zakhe zokuqala, i-Onazi neMastazi e-Durban University of Technology wase enza iziqu zobudokotela kwi-analytical environmental chemistry e-University of Witwatersrand.
Waqala ukufundisa e-UKZN ngonyaka wezi-2015, wadlondlobala wagcina esengumfundisi omkhulu ngowezi-2020. UDkt Mahlambi nguye yedwa i-environmental analytical chemist ophikweni oluseMgungundlovu kanti ugxile ocwaningweni oluthinta ukuvikela imvelo nempilo yabo. Ucwaninga ngendlela yokuhlola izinto ezingcolisayo emithonjeni ehlukene yamanzi, inhlabathi namasampula ezithelo nawemifino.
UDkt Mahlambi uhlose ukuqhamuka nendlela yokucwaninga izinto ezingcolisa imvelo esebenzayo, engabizi neyonga imvelo ukuphosa esivivaneni sokunqanda ukungcola kwamanzi nokuqinisekisa indlela elungile yokusebenzisa imithombo yamanzi enqabile.
UDkt Mahlambi unamaphepha ocwaningo angama-29 kanti useke wathola imiklomelo embalwa okukhona kuyona owokuya e-Sweden e-Lund University ngenkathi enza ucwaningo lwezobudokotela, i-Pittcon Travel Grant ye-American Chemical Society ngonyaka wezi-2020 ukuyokhuluma engqungqutheleni eyayise-Chicago eMelika. Ucwaningo lwakhe beluxhaswe yi-Thuthuka ye-NRF kusukela ngowezi-2017.
Ukucija abanye yinto emqoka emsebenzini kaDkt Mahlambi. Ubalule ukubaluleka kokukhiqiza isizukulwane esisha sama-environmental analytical chemist, wathi ubungcweti kulomkhakha budingeka kakhulu njengoba kuyikhono elinqabile eNingizimu Afrika. Useke weluleka abafundi abenza ucwaningo lweMasitazi abayisishiyagalolunye – bonke ezaqeda ucwaningo namaphepha ocwaningo ngesikhathi – abayisikhombisa be-Onazi, kanti kumanje ubheke eziyisithupha abenza iMasitazi nabahlanu abenza ucwaningo lwezobudokotela.
UDkt Mahlambi ubonge uNkulunkulu ngempumelelo yakhe, wabonga umyeni wakhe uDkt Mphilisi Mahlambi ngothando lwakhe olungaphezi, ukumeseka, ukuzinikela, ukumkhuthaza nokumthemba. Ubonge indodakazi yakhe ngokumeseka nokuqonda, wabonga unina ongasekho noninakhulu ngothando nokumeseka.
UDkt Mahlambi ubonge ithimba labafundi be-Environmental Analytical Chemistry Research ngenhlonipho, intshisekelo nokuzinikela okumkhuthaza ukuthi acije abanye abafundi, akhulise nolwazi lwakhe. Ubonge ezinye izifundiswa emnyangweni weKhemistri ngeqhaza lazo ekumkhuliseni.
‘Halala ngempumelelo yakho,’ kusho iPhini Sekela-Shansela le-CAES uSolwazi Albert Modi. ‘Usenze saziqhenya siyiKolishi. Qhubeka nomsebenzi wakho omuhle, wazi ukuthi sikweseka ngezikhathi zonke.’
Isikole Sezomthetho Siqoqe Izi-R18 million Zokuxhasa Ucwaningo
Ungoti WeFiziyoloji Yesivuno Uhlonishwe Kwi-Future Professors Programme Kazwelo